Patties ao amin'ny kefir dia mafana ao anaty recipe miaraka amin'ny sary
Pies amin'ny kefir (amin'ny ovy sy ny atiny)
Poster 11.07.2018 12.07.2018 Second courses
Ny zavatra manan-danja indrindra amin'ity recipe ity dia tsara yogourt. Avy eo ny koba dia ho lasa mafana sy mangarahara. Azonao atao ny mifidy izay tsirinao. Amin'ity tranga ity dia ity karazan-tsakafo sy ny atody (azonao ahitra, kohaka).
Raha tia namboarina mofo, no manoro hevitra anao mba hahandro patties noho izany fomba fahandro. Izy ireo dia azo avy amin'ny maitso mavana, malefaka sy tena matsiro. Fomba fanao dia mampiseho fa ny aty sy ny mofo ovy amin'ny fitsapana ny kefir vokatra tsara indrindra tiany, fa ny resaka tsiro. Andramo Hala-misy.
Sira sy siramamy - To taste
Soda - Lany tavoahangy 1 (hamonoana amin'ny vinaingitra)
Ny lafarinina - 3-4 Stakanov (firy no haka)
Ny menaka - 200 Gram
Zava-bolana - 1 Pieces
Ny menaka voajanahary - 1 Piece (ho an'ny fonom-boankazo)
Ahoana ny handrahoana "Pies amin'ny kefir (amin'ny ovy sy ny atiny)"
1. Tamin'ity indray mandeha ity dia nanapa-kevitra ny hanamboatra ny tsinay tsy amin'ny serum, fa amin'ny kefir. Ny fatim-piainana dia nitondra 2,5%. Tena faly aho noho ny vokatra, satria niparitaka toy ny lelafo ny koba. Ka, ny rehetra araka ny filaharany.
2. Maka fitahirizana lalina isika ary mandefa kefir ao anatiny. Tiako ny hametaka ny koba ao anaty vilia plastika lehibe (tsy mangatsiaka ary tsy misy fiantraikany amin'ny hafanana amin'ny koba). Raha miasa amin'ny fitsirihana ny leoparda ianao, dia zava-dehibe ihany koa io fotoana io.
3. Ampio sira sy siramamy hanandrana. Amin'ny ankapobeny ny kefir, dia eo amin'ny 1 eo ho eo aho eo ho eo.
4. Ampio ny soda, esory amin'ny vinaingitra izy.
5. Ampio ny lafarinina farany ary manomboka mamo ny koba. Mandritra izany fotoana izany, rehefa manomana ny koba, dia afaka manamboatra ovy sy ny atody eo amin'ny fatana. Ireo sakafo ireo dia miara-misakafo eo ho eo.
6. Ny atiny dia mamoaka rano aorian'ny minitra 20. Aorian'io, mila ilaozanao izany. Ny fofona malefaka indrindra dia ny atin'ny ronono.
7. Ny atiny voapoizina dia mihosotra amin'ny lavaka kely ary manilika. Avelao isika haka ovy.
8. Mofomamy ny ovy mandra-pahavitan'izy ireo, ary ravao ny rano. Ankehitriny dia mila atsipy izy fa tsy manampy rano.
9. Afangaro ny tongolo maina voatoto amin'ny menaka voajanahary, ary alefaso amin'ny fofony izany.
10. Mandritra izany fotoana izany dia nijanona kely ny kobanay, ary efa vonona tanteraka amin'ny "asa" izao.
11. Jereo hoe ahoana no ahitanao azy amin'ny tapany iray. Raha mihinana ronono ianao fa tsy kefir, dia ho toy ny rivotra ny koba. Apokoy izany ary atsofohy amin'ny ampahany kely ny ampahany tsirairay, ary avy eo manoritra ny endrika boribory.
12. Mandra-pahatongan'izany, dia kely dia kely ny fangonay ary afaka manomboka fanangonam-bary ianareo.
13. Aza manenina mameno. Ny koba dia mamolavola tanteraka ary tsy manaparitaka. Ho an'ny ampahany tsirairay mihodina dia mameno ny famafazana, ary avelao ny jamba amin'ny fomba mahazatra.
14. Mofomamy amin'ny menaka voajanahary amin'ny andaniny roa ambara-pokonolona.
15. Patties amin'ny kefir (amin'ny ovy sy ny atiny) dia tsara indrindra amin'ny endrika mafana sy mangatsiaka.
← Sandwich ho an'ny fitsangatsanganana eo amin'ny natiora
10 fomba hananganana ankizy tsara →